Semalt: Kungani Ukufunda SEO On Inthanethi Kuyinto Confusing
I-SEO isiza ekuthuthukiseni i-rankings kanye ne-traffic kumawebhusayithi.Ulwazi oluningi lwezemfundo mayelana ne-SEO ongayithola kwi-intanethi livela kubamemezeli abaphezulu bezinombolo kanye nochwepheshe be-niche abangashadile.Emakethe yokuncintisana yanamuhla, kubalulekile kubaholi bebhizinisi ukuba bathembele kancane ezintweni ezinjalo futhi baqonde ukuthi yikuphiI-SEO ibalulekile ekuthuthukisweni kwenkampani yesikhathi esizayo.
Igor Gamanenko, iMenenja Yokuphumelela Kwekhasimende i-Semalt ,uchaza ukuthi kungani ulwazi lwezemfundo mayelana ne-SEO olutholakala kwi-inthanethi luholela ezinqumweni ezingalungile kuhlelo lakho lwe-SEO.
Akudingeki singanaki ukubaluleka kwe-SEO izelulekongokuphelele - comparativa maquinas reflex digitales. Ngokuphambene nalokho, abantu kufanele baqhubekele phambili ngokuqapha,ukusebenzisa lezi ziphakamiso:
1. Qinisekisa ulwazi ngaphambi kokuqaliswa. Idatha enikezwe yinkambuabamemezeli bami bahluke kulokho oyothola khona.
2. Qonda ukuthi lolu lwazi lusho ukuthini ngempela inkampani yakhokungani kubalulekile ukugwema ukulandela iseluleko ngaphandle kwengqondo.
3. Zama izindlela ezintsha ezibonakala zibeka ingozi ngenxa yokungaqiniseki okuhilelekile.Kodwa-ke, izinzuzo zingase zibe ngaphezu kwendlela yokuhlola.
I-SEO ayiyona indawo yonke, futhi ihlukile ezindaweni eziningana njengezinhlelo zokusebenza,ububanzi bomncintiswano, kanye neziguquko eziqondene nebhizinisi. Isibonelo, ama-algorithms wendawo nesezwe ahluke..Umuntu ofunaizihloko mayelana ne-SEO yendawo izothola iseluleko se-SEO sezwe asibalulekile. Amafemu angasebenzisa amasu okuncintisana ahlukile asebenzisa izinqumo zawoamabhizinisi abo. Ngakho-ke, izici zokuphumelela azifani. Inkampani eyodwa ingahle iphumelele ngokusebenzisa amagama angukhiye kodwa ihlulekaomunye uma usebenzisa indlela efanayo. Ekugcineni, ubunzima bokusebenza kahle kwenza kube nzima ukuhlukanisa imbangela yomphumela onikeziwe.Izizathu ezishiwo ngenhla zenza indlela eyinkimbinkimbi yokwenza izinto ezikhethwayo ekusebenzeni kahle kwe-SEO. Yingakho thinaamakhasimende athemba izinsizakalo zethu.
Inkinga enkulu enkulu ethinta i-SEO namuhla ukusabalala kolwazi olungalungile.Ukungaqondisi kahle okungalungile kuyiphutha lommemezeli kuphela, kodwa imboni ngokwayo. Ukungazami komkhakha kwenza idathaukutholakala, okuyinto into ebalulekile ye-optimizers. Ngakho-ke, ochwepheshe kufanele bathole futhi banikele ulwazi kubathengingisho nangaphambi kokuqinisekisa. Kulula ukwakha umqondo esivela esenzakalweni esingasese kunezindlela ezijwayelekile zabafundi. Ngeinani elikhulayo lama-optimizers, ithuba lokusakaza ulwazi lwamanga luphakeme kakhulu. Ulwazi olungalungile lwamaqiniso luvela ku-self-proclaimedochwepheshe abanenhloso kuphela ukwenza inzuzo. Iningi lalezi zinhlanzi zolwazi zivela ezigumbini ezigunyaziwe eziphansi namaforamu.
Ucwaningo lwesayensi lubonisa ukuthi abantu bakuthola kulula ukufunda ngokukwenzaNgokungafani nezinhlobo zendabuko zemfundo. Ukufunda nokuvuselela ulwazi akuyikuba nesimo sengqondo esingenasisekelo sokuthi siyiniisebenza. Ngokungena ekusebenziseni iwebhusayithi ngokwakho, kuba lula ukuxazulula izinkinga intuitively futhi ufike nazoizixazululo ukuthi ngisho nabaholi bemboni babengakucabangi ngaphambili. Ukunganaki iseluleko, noma ukuyibuza, kuyoholela ekuthuthukiseni okukhuluindlela. Noma yiluphi iseluleko esinikeziwe kufanele luvele lungene uma ufunda ngembonini noma uma udala imibono emisha. Ukwenza isu elihle kakhulukudinga ukucabangela okucabangayo ngalokho okufundile nokufaka ucwaningo olwenziwe ngokucacile kwenkampani yakho.